Malezia: Bilaogera Enjehina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2017 7:06 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra tamin'ny Janoary 2007)
Toherin'ny tontolon'ny bilaogy Maleziana ny fanalàm-baràka nataon'ny New Straits Times Press (NSTP) an'ireo bilaogera roa – Jeff Ooi izay manoratra ny Screenshots sy Ahirudin Atan izay manoratra ao amin'ny Rocky's Bru. Vao marainan'ny 18 Janoary 2017 dia nisy lahatsoratra iray tao amin'ny Rocky's Bru izay mampahafantatra ireo mpamaky azy momba ity raharaha ity.
Efa nomena ahy ireo taratasy. Napetrak'izy ireo tamin'ny Talata hariva izy ireo, nanodidina ny tamin'ny 9.30 alina, tao amin'ny National Press Club. Mampihatra ny didy nivoaka manenjika ny Rocky's Bru, ity bilaogy ity, izy ireo. Manenjika ahy noho ny fanalàm-baràka ry zareo.
[Nomen-dry zareo taratasy koa i Jeff Ooi ao amin'ny Screenshots]
Naneho hevitra mikasika ilay tranga ihany koa i Unspun izay mipetraka any Indonezia
Ankehitriny tonga ny vaovao fa notoriana ireo Maleziana mpitoraka bilaogy (Screenshots sy Rocky’s Bru) noho ireo zavatra nalefany, avy tany amin'ireo olona rehetra, ireo mpanao gazety. Zavatra be dia be noho ny fanapahana sy fanosehana ny fihetsiketsehana ara-pahaizana mba hahatongavana aminà fahamarinana lehibe kokoa, ary ny fahakingan'ny famalian'ireo olona voakasika sy tafintohina, avy hatrany, mba hanitsiana ny diso rehetra ao anatin'ireo bilaogy.
Mandritra izany, mandray ny fepetra rehetra i Jeff Ooi ary mangataka ireo mpamaky mba hifandray aminy amin'ny fampiasana imailaka azo antoka.
Milaza ilay Maleziana mpanao politika mpanohitra, Lim Kit Siang, fa hisy vokany ratsy ilay fitoriana noho ny fanalàm-baràka
Tena hisy vokany lehibe eo amin'ny fahalalahan'ireo mpitoraka bilaogy sy ireo olon-tsotra mpanao gazety ireo fitorian'ny NSTP noho ny fanalàm-baràka ireo, satria tena ho lafo be ny vola aloa amin'ny fitsaràna, hany ka hahatonga ny olon-tsotra mpitoraka bilaogy tsy ho afa-mihetsika izany, mahatonga ny tsy fahazoana manao fizotra mifandanja mba hamaritana ireo zo ara-dalànan'ireo mpitoraka bilaogy sy ireo olon-tsotra mpanao gazety.
Satria ireo no tranga roa voalohany anà Maleziana mpitoraka bilaogy notoriana noho ny fanalam-baràka, hisy fiatraikany be amin'ny firoboroboana salama, matotra ary ara-demaokratikan'ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra io, tsy ho an'ny Aterineto ihany fa ao amin'ny firenena manontolo mihitsy.
Maneho hevitra ao amin'ny lahatsoratra, tsy mahita ny tànan'ny fanjakana maneritery ny fahalalahan'ny mpitoraka bilaogy i Jeffrey
Tsy famerana ataon'ny governemanta amin'ireo mpitoraka bilaogy ito. Vondron'orinasa tsotra manana ny zo-ny tsara ny New Straits Times Press (NSTP) – tsy azo ampilaharina amin'ny governemanta – ary manan-jo ara-dalàna tahaka antsika rehetra ny NSTP araka ireo lalàna, mba tsy ho alaina baràka (indrindra raha tsy nisy fanamarinana ara-dalàna ilay izy). Manao ny zavatra heveriny ho araka ny lalàna fotsiny izy – mety na tsy mety. Tsy azontsika vakiana ao anatin'ireo fivoarana tsy mahafaly ireo ny ho endrika tetidratsin'ny fanjakana na famoretana ny fahalalahan'ireo bilaogy.
Mangataka ny tontolon'ny bilaogy moa i Jeffrey mba hanampy hanatrarana ny tombon'ny NSTP amin'ny maha-vondron'orinasa manana vola azy
Ho antsika izay mino ny Fahalalahan'ny Aterineto (tao anatin'izay fetran'ny lalàna), afaka manalefaka ny taha tsy mifandaja isika amin'ny fanaovana fanomezana ara-bola ao amin'ny kitapom-bola ara-dalànan'ireo Mpitoraka Bilaogy mba andoavana ireo mpisolovava azy ireo.